यिनै हुन् ओमिक्रोनको डरले डाक्टरले ज्यान लिएको छोराछोरी र श्रीमती – Nep Stok
मंग्सिर १९, २०७८ आइतबार 356
काठमाडौं । डाक्टरले दुई सन्तान र श्रीमतीको ह’त्या ग’रे’का छन् । भारतमा एक डाक्टरले आफ्ना दुई सन्तान र श्रीमतीको ह’त्या ग’रेको खबर सार्बजनिक भएको छ । भारतको उत्तर प्रदेशको कानपुरमा यस्तो घटना घटेको भारतीय सञ्चारमाध्यहरुले जानकारी दिएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार डा. सुशील कुमारले आफ्ना दुई सन्तान र श्रीमतीको ह’त्या ग’रे’को खु’ले’को हो । उनले ह’त्यापश्चात आफ्ना भाइलाई प्रहरी बोलाउन म्यासेज गरेका थिए । प्रहरी त्यहाँ पुग्दा डा. सुशील भने फरार भइसकेका थिए । प्रहरीले एउटा नोट ब’रामद गरेको छ । नोटमा ओमिक्रोनका कारण मै’ले ह’त्या ग’रेँ । अब यिनीहरुको शव गन्नु पर्दैन भनेर लेखिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार डा. सुशीलले ४८ वर्षीय श्रीमती, १८ वर्षीय छोरा र १० वर्षकी छोरीको ह’त्या ग’रे’का हुन् । प्रहरीका अनुसार डा. सुशील डि’प्रे’शनका बिरामी हुन् । उनले निरन्तर औषधी प्रयोग गर्दै आएको पनि बताइएको छ।
विगत केही दिनयता मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४०० को हाराहारीमा रहेको थियो । शनिबार एकैदिनमा दुई हजार ७९६ जनाको मृत्यु भएको यो संख्या बिहारमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको पूरानो संख्यालाई पनि मिलाइएको जनाइएको छ । यद्यपी हिजो एकै दिनमा केरलामा कोरोना सङ्क्रमणको कारण २६३ जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ । आइतबार बिहानसम्म मुलुकमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको कूल सङ्ख्या ४ लाख ७३ हजार ३२६ पुगेको छ ।
देशमा अहिले पनि ९९ हजार १५५ सक्रिय कोभिड–१९ सङ्क्रमित रहेका छन् । यो संख्या कूल सङ्क्रमतिको एक प्रतिशत भन्दा कम भएको समाचारमा जनाइएको छ । सक्रिय सङ्क्रमितको यो संख्या ०.२९ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । गएको एक दिनमा ६ हजार ९१८ जना कोरोना मुक्त भएका छन् । हालसम्म ३ करोड ४० लाख ६० हजार ७७४ जना कोरोना निको भएका छन् । कोरोना मुक्ती यो दर ९८।३५ रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
यसैबीच, पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ८ हजार ८९५ नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै आइतबार देशमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको संख्या ३ करोड ४६ लाख ३३ हजार २५५ पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । भारत शनिबार एकै दिनमा १२ लाख २६ हजार ६४ जनाको कोरोना परिक्षण गरिएको थियो । यसैसँगै कोरोना शुरु भएदेखि हालसम्म ६४ करोड ७२ लाख ५२ हजार ८५० जना कोरोना परीक्षण गरिएको जनाइएको छ । भारतमा गत जनवरी १६ बाट कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान शुरु भएको थियो । सो समयदेखि हालसम्म एक अर्व ३८ करोड ९५ लाख ३८ हजार ३० डोज खोप लगाइएको छ ।
Prevभर्खरै आयो दुखद खबर-सीसीएमसीको बैठक बस्दै, पुन लकडाउन हुने पक्का
Next२०७८ साल मंसिर २० गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
कठै त्यो कालो दिन ! ५४ वर्षीय बुबाको गाडी भित्रै मृ’त्यु भएको थियो